1 ထိုင်ပေမြို့စစ်လင်ခရိုင်ရုံး111ခုနှစ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်ပန်းအိုး ․ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးကုသ ခြင်းသင်တန်းဝင်ခွင့်လမ်းညွှန် (6-10) 2022-06-24
2 ဒုတိယမျိုးဆက်သစ်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှကြိုဆိုပါတယ်။ (6-9) 2022-06-24
3 111ခုနှစ်မြို့ပြရေးရာဗျူရိုနှင့်ထိုင်ပေမြို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်စတီကျူ့တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့်「ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ- ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်အထူးတန်း」၏ဝင်ခွင့်အမည်စာရင်းကြေငြာချက်!!! (6-8) 2022-06-24
4 အစားအစာဖြင့်ပုံပြင်ပြောခြင်း-ဝမ့်ဟွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်ခန်းမ၏ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမျှဝေခြင်းလှုပ်ရှားမှု (6-7) 2022-06-20
5 နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည်《ထိုင်ဝမ်ကွမ်းဟွာမဂ္ဂဇင်း》ကို104ခုနှစ်12လကတည်းက အရှေ့တောင်အာရှသုံးဘာသာဖြင့်နှစ်လတစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ (6-6) 2022-06-20
6 ထိုင်ပေမြို့အစိုးရသည်အဓိက9ခုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ကော်ပို ရေးရှင်းချေးငွေပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ (6-5) 2022-06-15
7 ထိုင်ပေမြို့ပြည်သူ့ရန်ပုံငွေအိမ်သုံးအမြန်စစ်ဆေးအသုံးပြုခြင်းအစီအစဉ် (6-4) 2022-06-13
8 6လထျောက်သောင်ခရီး-စစ်လင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်ခန်းမယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမျှဝေခြင်းလှုပ်ရှားမှု (6-3) 2022-06-10
9 စာစောင်72ထိုင်ပေမိသားစုပညာရေးစင်တာ၏「မင်းနဲ့ငါရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေး」စီးရီး သင်တန်းများကိုစုံစမ်းမေးမြန်းရန်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှကြိုဆိုပါသည်။ (6-2) 2022-06-10
10 111ခုနှစ် 「အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆွေးနွေးပွဲ」 သင်တန်း (6-1) 2022-06-06
11 111ခုနှစ်「ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုရေးဆွဲခြင်း ~ ထိုင်ပေမြို့နိုင်ငံရပ်ခြားပြန်လာသူများနှင့်နိုင်ငံ ဖြတ်ကျော်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်ဒုတိယမျိုးဆက်မွေးစားခြင်းပံ့ပိုးကူညီမှုအဖွဲ့」(5-11) 2022-06-06
12 111ခုနှစ် 「နေထိုင်သူသစ်အလုပ်အကိုင်မြှင့်တင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်သစ်」၏「နေထိုင်သူသစ်အလုပ်အကိုင်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ」 (5-10) 2022-06-06
13 ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်ခန်းမ၏နဂါးလှေလှော်ပွဲတော်(တွမ်းဝူကျဲ)ပိတ်ကြောင်းကြေငြာချက် (5-9) 2022-05-30
14 ဒုတိယမျိုးဆက်သစ်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစတင်နေပါပြီ (5-8) 2022-05-30
15 【လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာ】စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာရတနာသေတ္တာ-ကလေးများ၏နေထိုင်မှုစခန်း ကိုစူးစမ်းပါ။ (5-7) 2022-05-30
16 ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်ခန်းမသည်ကပ်ရောဂါကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက်သုံးပွင့်ဆိုင် ခေါ်ဆိုမှုချက်ချင်းဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှု (5-5) 2022-05-23
17 111ခုနှစ်မြို့ပြရေးရာဗျူရိုနှင့်ထိုင်ပေမြို့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောလိပ်တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသည့်「ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ-ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်အထူးတန်း」အတန်းအကြိုရှင်းလင်းပွဲအတန်းအစားထိုးနည်းလမ်း (5-4) 2022-05-09
18 ဤမြို့နေ့ဟူခရိုင်ရုံးမှကျင်းပသည့်111ခုနှစ် 「ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်ရင်သားအလှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ」 (5-3) 2022-05-09
19 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမှကျင်းပသည့် 『ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ ပျော်ရွှ့င်ဖွယ်နေထိုင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု 』လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ပြိုင်ပွဲ (5-2) 2022-05-06
20 111ခုနှစ်မြို့ပြရေးရာဗျူရိုနှင့်ထိုင်ပေသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကောလိပ်တို့မှ「ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ-ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်အထူးတန်းခွဲ」ကိုပူးပေါင်း ကျင်းပခဲ့သည်၊ ပြေးစို့နော် ~ ပါဝင်ဖို့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်!!! (5-1) 2022-05-06